Kuze kube manje, ubuchwepheshe obuhlukahlukene okuhloswe ngaso ukwakhiwa okusheshayo Uhlaka izindlu, bamele core ukwakhiwa ongaphakeme liphumele cottage uhlobo izakhiwo, indawo lapho libhekene induduzo anda. Kumayelana nobuchwepheshe, kanye izinhlelo of amazinga ukwakhiwa kwezindlu ezincane bese uya kulesi sihloko.
Ubuchwepheshe yokwakha ongaphakeme liphumele
Modern embonini yezokwakha eRussia isebenzisa ubuchwepheshe ehlukile maloetazhek ukwakhiwa. Phakathi kwabo kukhona:
ukhuni efulemini yensimbi izindlu;
izakhiwo Multilayer, okuthiwa "isangweji" ukwakhiwa;
isakhiwo brick oluvamile;
ukusetshenziswa Foam ngokhonkolo noma izitini zikakhonkolo, ezibuye;
ukwakhiwa kwezakhiwo ne shuttering unomphela;
Ukusebenzisa ubuchwepheshe bamuva, kanye eliphezulu zokwakha ngendlela efanele usaqala yokwakhiwa kwafinyelela izinga esiphezulu ukushisa ukonga, amandla nokuqina kwayo imiklamo esiphelele.
Ngenxa indawo pre-nalehleliwe amakamelo esizayo futhi izindawo ezihlukahlukene ezihambisana, kungenzeka ukuba bafeze umsebenzi ukufakwa phezu ukufakwa nemizila zokuxhumana yendawo kahle okukhulu.
ubuchwepheshe Canadian - indinganiso isakhiwo ongaphakeme liphumele
Ngokuvamile ukwakhiwa ongaphakeme-liphumele izakhiwo kusekelwe ubuchwepheshe Canadian. Ingqikithi wabo ukusebenzisa ekhethekile kwe-SIP-panel. Siyabonga kulokhu kwaziswa, kungenzeka ukuba sifinyelele ezingeni engezansi izindleko isakhiwo esiphelele. Futhi lokhu kufinyelelwa ngenxa ukusetshenziswa eliphansi izinto.
SIP-panel benezingane eziningi Izinzuzo ebaluleke njengoba kuqhathaniswa ne akhiwe noma ukhonkolo. Ngokwesibonelo, izindawo nangokuvikela panel ezifana izikhathi 8 izimfanelo eziphathekako isitini izindonga. Ngakho-ke, ukuze ukufudumeza igumbi, kokuba izindonga kwe-SIP-panel zidinga ingasaphathwa kokutshala imali.
Brick - indaba for ubudala
Naphezu kweqiniso lokuthi isitini kubhekisela esenzakalweni esiyisimangaliso zokwakha kunalokho kuyabiza, ukuthandwa futhi ifunwa kakhulu kwamanye neze ninganciphi. Futhi lokhu kungenxa ngokuyinhloko yokuthi endlini isitini - isakhiwo ekhulwini.
Ngaphezu kwalokho, ungase futhi ukhethe ezifana izinzuzo izitini njengoba:
kungenzeka ngokusebenzisa izixazululo ezahlukene wesitayela ekwakhiweni ongaphakeme liphumele isitini isakhiwo elikuvumela ukudala yobuciko yangempela bokwakha;
njengasezulwini ukukhiqizwa izitini esetshenziswa ubumba kuphela zemvelo, impahla imvelo kungenzeka ukuqamba othambekele;
ikhono izitini "ukuphefumula" noma, ngamanye amazwi, breathability esihle kwenza kudalwa indawo esihle sezulu zasendlini ;
ukwahlukanisa High, ukumelana umlilo futhi ahlukahlukene ukusabela ezingezinhle imvelo ezifana imvula, isiphepho, iqhwa, kanye nekhono ukugcina ukufudumala;
imiphumela deleterious izinambuzane ezehlukene, ukhunta, isikhunta, izitini nezilwanyana ezincane ngokuphelele esabekayo.
Evundile ukhonkolo - esthetics nokwethembeka
Modern ukwakhiwa ongaphakeme liphumele izindlu kwenza bekholelwa ngokhonkolo evundile noma itshe yokufakelwa. Ukuphendula zonke izindinganiso yesimanje kanye nezidingo, le nto ivumela inhlanganisela sobuhle bayo izakhiwo ezifana nezimiso ezibaluleke kakhulu ukuhlala ukhululekile. Ngamanye amazwi, indlu evundile ukhonkolo frost nemithi, babe ukushisa kakhulu futhi ukwahlukanisa umsindo.
Ergonomics Cottages esakhiwe elinama ezinjalo kwenza kube nokwenzeka ukunciphisa kakhulu kwezindleko ezingokwezimali zokusetshenziswa bafudumale.
isisindo kuqhathaniswa ukukhanya zikasimende kusiza inqubo ukwakhiwa ukwakhiwa yokuhlala ngaphandle ukusetshenziswa eyengeziwe ezisindayo imishini, futhi ikuvumela ukuba bathathe ngokuphelele kunoma iyiphi inhlobo isisekelo.
Ukwakhiwa ongaphakeme liphumele izindlu izingodo
Kanye nokusetshenziswa kwe-ugodo abavamile, okuthandayo okwandisa is yinqwaba unikezwa profiled muva. Umehluko ebalulekile itholakala kakhulu isakhiwo kokuba anemifantu yayo kanye spikes.
Izinzuzo esemqoka ibha profiled, njengoba kuqhathaniswa avamile, yilezi ezilandelayo:
sibonga kakhulu yokukhiqiza ubuchwepheshe, kufaka ukusetshenziswa umshini Planer, okungenani oyedwa wezihlobo kwalo mkhiqizo ziyoba ekhishwa surface ngokuphelele flat futhi bushelelezi;
ngenxa nezilimi inkatho isakhiwo, kumiswa imifantu lincishisiwe.
Ubuciko ongaphakeme liphumele izindlu Monolithic
Njengomthetho, yesimanje izindlu okuqinile kufanele design eyingqayizivele formwork unomphela. Phakathi izinzuzo obungenakuphikwa zezakhiwo ezinjalo kungathiwa:
asikho isidingo ukusetshenziswa imishini esindayo;
kungenzeka usebenzisa yiluphi uhlobo isisekelo ngokuphelele ngenxa ukwakhiwa isisindo ngokwanele ukukhanya;
ukuqina (umkhuba eside eziqinisekisiwe).
Indima itshe ekwakhiweni indlu
Lesi sakhiwo ezingabizi kakhulu uhlala itshe impahla. Ukuhlukahlukana ocebile umbala Palette yamadwala, izinhlobo, ukwakheka ivumela Ihlanganisa imibono Amazing kakhulu futhi ecabanga ekwakhiweni endlini. Ngaphezu kwalokho, izinto zokwakha kuyahluka ezingeni ngokwanele eliphezulu amandla, ukuthembeka nokuqina kwayo.
Ngaphezu kwalokho, ungakhetha itshe kwedivayisi esingavamile nezinye izinto zokwakha.
ukwakhiwa okuphansi liphumele: amaphrojekthi zezakhiwo yesimanje
Yegatsha isakhiwo Umklamo ongaphakeme-liphumele izakhiwo ihlukaniswa ngezindlela eziningana.
1. Vacation izakhiwo.
Holiday ekhaya - into ibekwe esikhethiweyo ngokukhethekile le njongo esiqeshini sendawo array kwanoma iyiphi ingadi. Isici ebalulekile ukwakhiwa Villa, okuyinto liwuhlukanise, isibonelo, kusukela cottage, kukhona indawo lapho uya khona, yenzelwe yokuhlala gqwa. Ukuze ukwakha ikhaya iholide, asidingi sezingxoxo wezinyathelo ethize. Nokho, kanye umklamo endlini eziningi imikhawulo ngaphansi komthetho. Ngakho-ke, ngaphambi kokuqhubeka ngqo esigabeni ukwakhiwa, kufanele kube khona nokubuyisana nomthetho wamanje.
2. Aphathimenti izakhiwo ngabanye.
Ngokusho ikhodi yokuhlela yedolobha lanamuhla sisebenza kuleli Insimu Russian Federation, ngamunye isakhiwo yokuhlala - indlu ukuthi ine izibuya ezingeqile kwezintathu futhi yokuhlala umndeni eyodwa kuphela. isakhiwo ongaphakeme liphumele enjalo ikhona, njengoba umthetho, e "iZwe zasemizaneni." Kulezi izindlu enikeziwe kungenzeka yokubhalisa. Ngaphambi ukwakhiwa ngabanye ukwakhiwa kwezindlu kuyadingeka ukuba bathole imvume ekhishwe nguMnyango Architecture. izinkampani Modern ukwakhiwa ikakhulukazi ukunikeza amakhasimende abo uhlu amaphrojekthi ejwayelekile kwezindlu ngabanye, okuyinto ukufunda, futhi ngizikhethele engikuthandayo, unga ngokuqondile unjiniyela.
Bungalow kuyinto ephansi kuyanda isakhiwo yokuhlala kokuba isakhiwo egqinsiwe yamafulethi. efulethini ngamunye has ekungeneni ayo, lingaxhumani. Fashion ukwakhiwa ongaphakeme liphumele townhouses beza kithi besuka eYurophu, lapho le umkhakha luyachuma isikhathi eside futhi ngempumelelo. Lokhu funa abalulekile kule hlobo luni lwezindlu, evezwe muva nje, akusiyo ngephutha. Phela, isizumbulu semali okulingana, bathi, elilodwa elalingaphandle efulethini, umthengi uthola endaweni esiphilayo cishe 2 izikhathi ezingaphezu, futhi ngaphezu kwale itulo elincane ezweni, cishe 1-2 aluka. Yonke uhlu imibhalo iphrojekthi ukwakhiwa Townhouse efana izindlu zangasese.
4. Le phrojekthi ongaphakeme liphumele esinezindlu eziqashisayo.
izakhiwo ezinjalo zifana endinganisweni efulethini izindlu, ne umehluko kuphela nokuba ukuthi isibalo izibuya ingeqi ezine. Design sici zalezi zakhiwo iyatholakala ongakhetha kuzo. Lokhu kungaba ubuchwepheshe Monolithic, kanye wokwakha noma anezinhlaka.
Ukuhambisana ubuchwepheshe ukwakhiwa - akaqinisekisi imiphumela izinga okusezingeni
Ukwakhiwa maloetazhek kusho ukuhambisana saziso nge nesibalo esikhulu imithetho nemigomo, ngamanye amagama okubizwa ngokuthi SNIP. ukwakhiwa okuphansi liphumele kuhambisana ezithile nohlaka namazinga obuchwepheshe kuyokwenzeka ukuthola enhle hhayi kuphela, kodwa futhi ekhaya ukhululekile futhi ephephile, bakwazi ukunikeza indawo yokuhlala ntofontofo kakhulu wonke amalungu omkhaya.
Futhi ubuchwepheshe oshintshashintsha anganika ekhaya ukukhanya, ubuntu kanye dynamism.
Ububanzi zamapulangwe metal
Usimende okuhlobisa ngaphansi kwedwala ebeka izandla zakhe
Amehlo silume: zalokho okufanele ukwenze ukuze ayibulale ukuluma
Indlela ukuqeda eziyinsungulo e amazambane? Amacebo eziwusizo
Inkinga ikuphi-ingabe ubani esongela izinyoka ezinesihlungu? izinganekwane Slavic
Ubunikazi Private komhlaba esifundeni Moscow: i elingacacisiwe inkinga izigaba.
Kungani ukubhuka indoda yesimanje?